लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सम्झौता हुँदैन – Janaandolan.com
Home / Uncategorized / लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सम्झौता हुँदैन
लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सम्झौता हुँदैन
janaando lan4weeks ago	Uncategorized Leaveacomment 50 Views
आज मे ३ तारिक विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस भन्ने कुरा मेरो दिमागबाट झन्डै हराएछ । बिहान दैनिक शारीरिक व्यायाम सकेर यसो सामाजिक सञ्जाल हेर्दैगर्दा साथीहरुले फोटो हालेर शुभकामना दिँदा मात्र याद आयो, ओहो… आज त मे ३ तारिक ।
अचेल शरीरले अलि बढी आराम पाएको छ तर दिमाग बिना काममा बेस्कन चलेको छ । किन चल्दैछ भन्ने नै थाहा पाउन छोडिएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम तथा त्यसले निम्त्याएको र सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण पनि हुनसक्छ दिमागमा अनेकौं कुरा खेल्छन् ।
घरमै बसेका बेला आजका दिनका बिगतका कार्यक्रम तथा गतिविधिहरु सोचें । परिस्थिति बदलिएको छ । यस अघि सडकमा निस्केर प्लेकार्ड, ब्यानरसहित प्रेस स्वतन्त्रताको नारा घन्काउँदै र भाषण गर्दै यो दिवस मनाउने गरिन्थ्यो तर आज अधिकांश पत्रकार घरमा छन् । पत्रकारहरुले आफूलाई सुरक्षित राख्दै, कान र दिमाग चनाखो राख्दै प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिइरहेका छन् ।
विषय रह्यो प्रेस स्वतन्त्रताको । जो मानिस कहिले पनि निरपेक्ष रहन सक्दैन, उसले गरेको पत्रकारिता पेशा स्वतन्त्र रहन सक्ला ? गम्भीर प्रश्न यहीँ छ। मैले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पत्रकारिता पेशासंग जोडें । किनभने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अधिकांश आत्मसात गर्नेमा पत्रकारिता गर्नेहरु नै धेरै छन्, हुने गर्छन् । यो नेपालको मात्र नभएर विश्वव्यापी अभ्यास हो।
फेरि पनि प्रश्न उठ्छ एउटा सापेक्ष मानवले गर्ने पेशा निरपेक्ष रहन सक्ला ? तर पत्रकारिता यस्तो पेशा हो जहाँ व्यक्तिगत धर्म, राजनीतिक सिद्धान्तलाई पर सारेर आम मानवका लागि सन्तुलित सूचनाको आहार पस्किने गरिन्छ । हुनुपर्ने पनि त्यही हो ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मैले अगाडि सारेका विषय त केवल सपनामा पनि संभव हुँदैन होला जस्तो लाग्छ । म पनि दुधले नुहाएको पत्रकार त कहाँ हो र ! तर जब मेरो विवेकले जाने, बुझें तबदेखि आफू सन्तुलित पथमा डोर्याउने प्रयत्नमा छु । त्यसका लागि मैले म भन्दा अघिल्लो पिंडीका केही अग्रज तथा पछिल्लो पिंडीका केही भाइ(बहिनीहरुबाट सिक्दैछु ।
प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिला पत्रकारहरुको लेखेर नै जीवन चल्ने वातावरण जबसम्म चल्दैन तबसम्म यो संभव छ जस्तो लाग्दैन ।
जीवन नचलेपछि उसलाई चलाइदिनेप्रति उसको कलम अलि नरम स्वभावको हुन्छ स्वाभाविकैले । त्यहाँ पनि उ सन्तुलित बन्न सक्दैन।जबसम्म राजनीतिक रंगले पत्रकारलाई सञ्चालन गर्छ त्यहीँ समस्या आउँछ । म त भन्छु राजनीतिक दलसंग आबद्ध सबै पत्रकारका संगठन खारेज गर्नुपर्छ । संगै काम गर्ने स्वाभीमान नत्याग्नेहरु जहीँको त्यहीँ रहने तर चाप्लुसी गरेकै आधारमा क्षमताविहीन मान्छेलाई सरकारी सञ्चारमाध्यमको कुनै एउटा कार्यालयको हाकिम बनाइदिएपछि ऊ भन्दा अग्रजलाई परेको मर्काको बारेमा सोचिनुपर्छ। हो, त्यही भएका कारण हाम्रा धेरै दिग्गज साथीहरुले उक्त संस्था छोड्नु परेको इतिहास छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता हुँदैन । तर त्यसका पनि निश्चित मर्यादा र आचारसंहिता छन्। ती निश्चित मर्यादा र आचारसंहितालाई पालना गर्दै पत्रकारहरुले पेशा गर्नुपर्ने बेला हो यो र लोकतन्त्रमा कुनै पनि नागरिकले मर्या्िदत स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिएकै भरमा दण्डित हुनु हुँदैन। जुन नेपालमा केही समयदेखि केही घटनाहरु भएका छन्। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।
About janaando lan
Previous रोदनका बीच प्रेस स्वतन्त्रता र हाँसो दिवस
Next मन्त्री गजमेरको पहलमा सडकमा रहेका आठ महिलाको उद्दार
झापामा थप ५ जनामा संक्रमण, जाेखिम बढ्दै
झापा ७ जेठ । झापामा भारतबाट आएर कचनकवल गाउँपालिकाकाे क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका थप ५ जनामा …